12 | December | 2007 | Layma's World
Posted on December 12, 2007 by layma
Ps . ငမျှားချိတ် ပြောတဲ့…. အရည်မရအဖတ်မရ ကချော်ကချွတ်စာရေးတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါအဖြစ်က လွတ်လိုလွတ်ငြား အကျိုးပြု ပညာပေးစာ ရေးကြည့်တာ …။ 🙂
Filed under: That's what I wanna say |	9 Comments »